Sidee loo Shakhsiyeeyaa Gmail-kaaga? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Waxaa laga yaabaa 12, 2021 0 comments 575
Gmail waa mid ka mid ah adeegyada inta badan laga isticmaalo adduunka waana adeeg aan lahayn kharash dheeri ah oo siinaya sahlanaanta helitaanka qalab kasta.
Markaad isticmaaleyso emaylkaaga elektaroonig, ma leedahay
Beddel asalka, farta iyo dulucda Gmail: Si aad u sameysid taariikh ugana dhigto Gmail, guji "Sawirradayda", dooro adeegga gelinta Google mawduuca Gmail-na si toos ah ayuu u muuqan doonaa Hab kale oo loogu talagalay sawirka asalka ah ayaa dooranaya asalka qoraalka si uu ugu madoobo geesaha ama u calaamadeeyo waxyeello cillad ah.
Inaad yeelato dulucda waxaan leenahay faa'iidada ayaa ah inaan sameyn karno isbedello oo aan u habeyn karno oo aan uheli karno qaybta Mowduuca, ka dibna dejinno mawduuca. Taas oo aan ku arki doonno daaqad aan ku kala xulano mawduucyada ka socda adeegga Google.
Xaaladda isbeddelka cabirka xarafka, Gmail malaha shaqadan, sikastaba waxaa macquul ah inay lamid tahay iyada oo loo marayo "Cufnaanta waxyaabaha". Dhinaca kale, Gmail waxay kuu ogolaaneysaa inaad qaabeyso jumlada, midabka, cabirka, font ee la isticmaalo marka la qorayo ama la bixinayo jawaab.
Wax ka beddel isha iPod ama iPhone.
Tag Gmail on iPod ama iPhone.
Riix "Compose" midigta midig.
Laba jeer tuubada waxyaabaha aad dooneyso inaad qaabeyso
Xulo xulashooyinka qaabka aad rabto: farbarashada, geesinimada, hoosta laga xariiqay iyo kuwa kale.
Wax ka beddel cabirka farta.
Screen oo dhalaala.
Cabbirka ee qoraalka.
Wax ka beddel farta ku qoran Android.
Ir barnaamijka Gmail loox Android ah ama taleefan.
Taabo "Qor"Hoos sax ah.
Abuur mawduuc u gaar ah Gmail.
Guji qalabka, midigta kore ee shaashadda
Marca ikhtiyaarka "Mawduucyada".
Dooro waxaad u baahan tahay: Sawirro. Tilmaaman, sawir dhowaan la xushay, soo dejiso sawir ama URL sawirka aad rabto inaad shakhsiyeeyo.
dhagsii ku jira "Xullo"
Xulo asalka ha ahaado iftiin ama mugdi.
Tag Mawduucyada "Dejinta deg deg ah"
Tag mowduucyada "Eeg dhammaan dejimaha."
Mawduucyadu waa kuwo midabo badan leh, sidaa darteed, waa inaan tagno mugdiga sidaasna waxaan ku yeelan karnaa aragti si aan u ogaanno haddii aan badbaadinno, haddii aysan ahayn tan aan dooneyno, waxaan riixi doonnaa oo kaliya joojinta markalena waxaan ku laaban doonnaa mowduucii la dejiyay .
Kudar batoon si aad ugu lifaaqdo feylasha Facebook, Instagram, Dropbox, iwm.
Cloudy for Gmail waa fidinta Google Chrome, oo shaqadeedu tahay in lagu daro batoon faylasha oo dhan lagu kaydiyo daruuraha oo ay ku jiraan kuwa ka socda shabakadaha bulshada iyo haddii aad ku dhejin karto si aad u badbaadiso meel, waqti iyo shaqo.